သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့ - ၁၈ ရက်နေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်
12 ส.ค. 2562 - 10:19 น.
မိဿရာသီ (ဧပြီ ၁၃ - မေ ၁၄)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း ကံအထူးကောင်း နေမည်။ အခက်အခဲအနည်းငယ်တော့ရှိသော် လည်း အကျိုးစီးပွား မထိခိုက်ပါ။ ဈေးနှုံးပြိုင်ဆိုင်မှုများ လေလံပြိုင်ပွဲများ အနိုင်ရမည်။ မိမိပြိုင်ဘက်၏ သတင်းများ အခြေအမြစ်မရှိပါ။ အမြင့်မတက်ရ။ ငွေကြေး (သို့) တန်ဘိုးရှိလကိဝတ်ရတနာ လာဘ်ဝင်မည်။ ဂုဏ်သရေရှိ အလုပ်ကောင်း ရမည်။ သူငယ်ချင်းများ မသင့်မတင့်ဖြစ်မည်။ ချစ်သူမရှိသေးသူများ ချစ်သူတွေ့မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင်လက်ခံနိုင်သည့် အပြောင်းအလဲများရှိမည်။
ပြိဿရာသီ (မေ ၁၅ - ဇွန် ၁၄)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း အလုပ်အကိုင်များ အဆင်ပြေနေမည်။ သင်သိသည်ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ သင့်အကျိုးကိုလိုလားသည့် သူများသာရှိမည်။ မသိသောအမျိုးသ္မီးများထံမှ လာဘ်ရမည်။ တယ်လီဖုံး (သို့) ဆက်သွယိရေးပစ္စည်းများ ရမည်။ အလုပ်ရရန် အဆက်အသွယ်ရှာခြင်း မလုပ်ရ။ အိမ်နီးချင်းများနှင့် မသင့်မမြတ်ဖြစ်ခြင်း ရှောင်ပါ။ တယောက်ထဲ အပြင်သွားလျင် လူမိုက်များနှင့် ပြဿနာဖြစ် တတ်သည်။ ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အရက်သေစာဆိုင်များသွားခြင်း မြစ်ချောင်းကမ်းပါးအနီး အရက်သောက်ခြင်းများ သင့်အတွက် မလုံခြုံပါ။
မေထုန်ရာသီ (ဇွန် ၁၅ - ဇူလိုင် ၁၅)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း ကြာရှည်စွာကံနိမ့်လာသူများ ကံစတင်ကောင်းလာတော့မည်။ တခြားသူများထံရောက်နေသော သင့်အကျိုး စီးပွားများပြန်ရမည်။ အကြွေးများပြန်ရမည်။ ပညာရေး မျှော်မှန်းသည်ထက်ကောင်းမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမည်။ အိမ်အနီးရှိ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများကြောင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စ အဆင်ပြေမည်။ သင့်အားခြိမ်းချောက် နေသော ရန်သူများ အဝေးသို့ ရောက်သွားမည်။ ချစ်သူမရှိသေးသူများ သူငယ်ချင်းများထဲမှ ချစ်သူတွေ့မည်။ ညဖက်လယ်ပတ်လျင် သင့်ထက်ငယ်သောသူ နှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီး ဆုံးရှုံးမှု များမည်
ကရကဋ်ရာသီ (ဇူလိုင် ၁၆ - သြဂုတ် ၁၆)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း အလုပ်တွင် အတူတူလုပ်သူများအကြား အပြောင်းအလဲ ရှိမည်။ သို့မဟုတ် မိမိအပေါ်ကောင်းခဲ့သော လူကြီးကမိမိအား ပြောင်းရွှေ့မည်။ အုပ်ချုပ်သူများပြောင်းမည်။ သင့်အလုပ်ကို စောင့်ကြည့်ဝေဖန်သူရှိသော်လည်း ကံမြင့်နေ၍ ထိရောက်မှုနည်းမည်။ လာဘ်များရရှိပါက မည်သူ့ကိုမျှ အသိမပေးလျင်ကောင်းသည်။ အခြားသူ၏ အကောင်းအဆိုးကို ပြောမိပါက မိမိသာလျင် မကောင်းဖြစ်မည်။ အကြွေးပြန်ရမည်။ မသင့်မတင့်ခဲ့သူများနှင့်ပြန်အဆင်ပြေမည်။ မည်သူနှင့်မျှငြင်းခုံခြင်း မပြုပါနှင့်။
သိဟ်ရာသီ (သြဂုတ် ၁ရ - စက်တင်ဘာ ၁၆)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း လောင်းကစားနှင့် မပတ်သက်သော လာဘ်ဝင်မည်။ ပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်း ကောက်ရတတ်သည်။ အသက်ကြီးသူ အမျိုးသမီးများထံမှ လာဘ်ရမည်။ တယောက်ယောက်ကို ချစ်ကြိုက်မိပါက ဆွေမျိုးများ၏ အခြေအမြစ်မရှိ ကန့်လန့်တိုက်ခြင်း ခံရမည်။ သင်၏စိတ်ကိုထိမ်းချုပ််နိုင်ပါက ပြဿနာ မဖြစ်ပါ။ တိရစ္ဆာန်များ အိမ်ကို ရောက်လာပါက ပိုင်ရှင်ထံပြန်ပို့ပါ။ ခရီးဝေသွားပါက အဆင်မပြေ မလုံခြုံပါ။ လက်ဝတ်ရတနာဝင်မည်။
ကန်ရာသီ (စက်တင်ဘာ ၁ရ - အောက်တိုဘာ ၁၆)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း အကျိုးစီပွား ဝင်ငွေကောင်းမည့် သတင်းကြားရမည်။ လာဘ်နှင့် အကျိုးစီးပွားရမှုများသိပ်မကြာပါ။ မနာလိုသူများကို ဂရုမစိုက်ပါနှင့်။ နိုင်ငံရပ်ခြား ရှိ ဆွေမျိုးများထံမှ လာဘ်ရမည်။ လကိဝတ်ရတနာဝင်မည်။ ငွေကြေးဝင်မည်။ အိမ်မရှိသေးသူများ အိမ်ဝင်မည်။ တပည့်များထံမှ သတင်းကောင်းကြားရလျင် အမှန်ဖြစ်မည်။ အိမ်ဖော် အလုပ်ထွက်မည်။ လာဘ်ဝင်လျင် မည်သူ့ကိုမျှ မပြောသင့်။ အချစ်ရေးကောင်း၍ လူကြီးများ အားပေးမည်။
တူရာသီ (အောက်တိုဘာ ၁ရ - နိုဝင်ဘာ ၁၅)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း ခက်ခဲသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်၍ ချီးမွမ်းစရာဖြစ်မည်။ အိမ်အနီးရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးများ တိုးတက်မှုကောင်းသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသော မိတ်ဆွေများ တပည့်များ သက်သာလာမည်။ ရေလွမ်းမှုများ ရေမဲ့ဒုက္ခများ မလျော့သေးပါ။ အဝေးမှလာဘ်ဝင်မည်။ အလုပ်အတွက် အကျိုးပေးသော သတင်းကြားရမည်။ တာဝန်ယူသလောက် ဝင်ငွေတိုးမည်။ တတ်ကျွမ်းသူများနှင့် ဆက်သွယ်မှုရမည်။ တန်ဘိုးကြီး လက်ဝတ်ရတနာဝင်မည်။
ဗြိစ္ဆာရာသီ (နိုဝင်ဘာ ၁၆ - ဒီဇင်ဘာ ၁၅)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း မထင်မှတ်သော ပြောင်းလဲမှုများ တွေ့ရှိမည်။ ဆောက်လုပ်ခြင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းကြီးများ အိမ်အနီးတွေ့ရမည်။ အနည်းနှင့်အများ သင့်ကိုထိရောက်မည်။ လာဘ်ဝင်မည်၊ ပစ္စည်းဝင်မည်၊ ထီပေါက်မည်။ ရင်နှီးမှုများ အိမ်ယာဆောက်လုပ်ရေးများမှ ငွေဝင်မည်။ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုများအနီး မသွားရ။ ဘာသာရေးများ အဆင့်မြင့်ပညာ ရပ်များ တတ်ကျွမ်းမည်။ တန်ခိုးရှိပစ္စည်းများ လက်ဆောင်ရမည်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ များနှင့် သိရှိဆက်သွယ်မှုရမည်။ ခရီးဝေး မသွားသင့်သေးပါ။
ဓနုရာသီ (ဒီဇင်ဘာ ၁၆ - ဇန်နဝါရီ ၁၄)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း ထူးခြားသောကံ ရှိမည်။ တန်ဘိုးရှိပစ္စည်းများ မထင်မှတ်ဘဲ ရမည်။ ယာယီရာထူးတိုးခြင်း ကိုယ်စားလုပ်ရခြင်းများ ရှိမည်။ လွတ်လပ်စွာနေသူများ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းသူ ပေါ်မည်။ ပြီးသွားသော အလုပ်များ၏ အကျိုးခံစားရမည်။ ဝေးလံ သောဒေသရှိ အိမ်ကို မဝယ်ပါနှင့်။ ငယ်ရွယ်သော ဆွေမျိုးများ တပည့်များမှ မမှန်သတင်းဖြင့် နံမည်ဖျက်မည်။ မည်သူ့မျှအားကိုးစရာမလိုဘဲ တဖြေးဖြေး ကံကောင်းလာမည်။ လှပရန် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း မပြုရ။ ဆွေးမျိုးထဲမှ စွမ်းရည်ထက်မြက်သူ ၏ အကူအညီရမည်။
မကာရရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၁၅ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း များပြားသောငွေများ သင့်လက်မှဖြတ်သွားမည်။ သင့်အတွက် မဟုတ်ပါ။ သင့်၏တပည့်များအကြား ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်နေမည်။ သို့ကြောင့် သင်၏အကျိုးစီးပွားပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိမည်။ သင်အိမ်သို့ ပြင်ပလူများကို မလာပါစေနှင့်။ ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးမှုများအတွက် လက်သည်မရှိဖြစ်မည်။ ခရီးသွားမှုများ ဆက်သွယ်မှုများကြောင့် ရလာဒ်ကောင်းမည်။ ပြဿနာများကိုနားလည်ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အလုပ်သစ်များတိုးပွားမည်။ တံတားများအနီး မတော်တဆဖြစ်မည်။ အငြင်းပွားမှုများနှင့် မပတ်သက်ပါနှင့်။
ကုမ်ရာသီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ - မတ် ၁၄)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း မမျှော်လင့်သော အခက်အခဲများစွာတွေ့မည်။ ဝေးနေသော သင့်ပေါ်မကောင်းခဲ့သူများ ပြန်လည် ချဉ်းကပ်လာမည်၊ မယုံပါနှင့်။ လှေ သင်္ဘောစီးခြင်း ရေအနီးအနားနေခြင်း မလုံခြုံ ပါ။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများ စိတ်ဝင်စားစရာ အဆိုပြုချက် ပေးလာမည်။ သင်တတ်နိုင်သည်ထက်များနေမည်။ ပြဿနာဖြင့် ရပ်တန့်နေသောအလုပ်များ ဆွေးနွေူညှိနှုင်းမှုရလာဒ်ကောင်းမည်။ ဝေးကွာနေသော ချစ်သူများအကြား ပြဿနာရှိမည်။
မိန်ရာသီ (မတ် ၁၅ - ဧပြီ ၁၂)
ဤသီတင်းပတ်အတွင်း အလုပ်ကို ပေါ့ပေါ့ဆဆလုပ်မိလျင် ဆုံးရှုံးမှုများမည်။ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများအပေါ် မယုံမကြည်ဖြစ်နေမည်။ သက်သေအဖြစ် တရားရုံးတက်ရမည်။ အစားအသောက် အချိန်မှားနေမည်။ တိရစ္ဆာန်များကို အစာကျွေးရန်မေ့နေမည်။ အခြားသူများအကြောင်း အကောင်းအဆိုးပြောခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးရ မည်။ အိမ်ကို စိတ်တိုင်းကျပြင်မည်။ လူကြီးများ၏ အထင်လွဲခြင်း ခံရမည်။ ချစ်သူမရှိသေးသူများ ချစ်သူကောင်းရမည်။
บิณฑ์ ร่ำไห้ประกาศลาออกร่วมกตัญญู ลั่นไม่เคยจะตบเด็ก แต่ไม่ทนคนจาบจ้วง
‘ประยุทธ์’ตอบแล้วกลางสภาฯ ถ้าผมลาออกจากนายกฯ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แฟนๆแห่ให้กำลังใจ! ลิซ่า BLACKPINK เคลื่อนไหวครั้งแรก หลังถูกมรสุมดราม่าถล่มเละ
อัลบั้มภาพ သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့ - ၁၈ ရက်နေ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်